मिटरब्याजी रामदेश साहकी छोरी काठमाडौंबाट पक्राउ – Ramailo Sandesh
काठमाडौं, जेठ ३० गते । सप्तहरीका मिटरब्याजी रामदेव साह तेलीकी छोरी अनुराधा साह तेलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौं, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ठगी र आपराधिक विश्वासघात मुद्दाका फरार प्रतिवादी अनुराधालाई सोमबार काठमाडौंको बुद्धनगरबाट पक्राउ गरेको हो ।
मो. तैयव अली समेतको जाहेरीका आधारमा साहलाई पक्राउ गरिएको हो ।
लोग्ने मान्छेले अ’र्काकी स्वा’स्नी फकाउन मिल्छ भने म’हिलाले अ’र्काको लोग्ने फ’काउन कि’न मि’ल्दैन…… ?
महिलाभित्र देखा पर्ने दमित प्रेम र यौ न लाई अक्षरमा उतार्ने लेखिका हुन् । अभिलासा २०६३ कविता संग्रह, अभिषेक २०६६ उपन्यास तथा तिम्रो लोग्ने र म २०७१ गरी ३ वटा पुस्तक बजारमा ल्याइसकेकी निरुपा पुराना कवि चितवन शिखरवासकी छोरी हुन् । कथा संग्रह ‘तिम्रो लोग्ने र म’ बजारमा आएपछि उनी आलोचितसमेत भएकी थिइन् ।
प्रसिद्ध कथाकार मनु ब्राजाकीको कथा संग्रह ‘तिम्री स्वास्नी र म’ कै शैलीमा लेखिएको ‘तिम्रो लोग्ने र म’ र उनको लेखनका विषयमा निरुपासँग साप्ताहिकको कुराकानी मनु ब्राजाकीकै शैलीमा ‘तिम्रो लोग्ने र म’ लेख्नुपर्ने कुनै कारण थियो
त्यो कथा मैले आफू कि’शोरी हुँदा पहिलो पटक पढेकी थिएँ । कथाको पात्र अर्काकी श्रीमतीसँग हाकाहाकी बे’डसम्म पुगेको कुरा पढ्दा मेरा कान रातापीरा भएका थिए । लोग्नेमानिस कति सजिलै यस्ता कुरा लेख्न सक्छन्, स्वास्नीमानिसले यस्तो लेख्न सक्लान् ? कसले लेख्ला यस्तो कुरा भन्ने लागेको थियो ।
यति विवाद र प्रशंसा होला भन्ने लागेको थियो त्यो कथा २०६८ सालको मधुपर्कमा प्रकाशित भयो । छापिनुअघि यति धेरै प्रतिक्रिया आउला भन्नेचाहिँ लागेको थिएन । नकारात्मकभन्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया बढी पाएँ । स्वयं मनु ब्राजाकीले ‘महिलाले महिलाका पक्षबाट कसैले यो कथा लेखोस् भन्ने चाहेको थिएँ, तपाईंले लेख्नुभयो । तपाईंलाई धन्यवाद र बधाई छ ।’ भन्नुभयो ।
नेपाली समाजमा जति पुरुषहरूले यौ’निक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्छन् त्यति महिलाहरूले गर्न सक्छन्
इच्छा त उही हो, चाहे लोग्नेमानिस हुन् वा स्वास्नीमानिस । यौ’निक स्वतन्त्रता जैविक हो तर आर्थिक स्वतन्त्रताले त्यो कुरामा उनीहरूलाई बाधा दिने गरेको छ । आजको युगमा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रमुख भएर आएको छ । जोसँग हैसियत छ, उसले लोग्नेमान्छेलाई पनि केही दिन भाडामा लिएको देखिन्छ ।